News - Mmepe nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na China site na ọsọ ọsọ ọsọ ruo oge kwụsiri ike
Waya na USB ụlọ ọrụ bụ ihe dị mkpa na-akwado ụlọ ọrụ na China aku na uba na-ewu. Ọ na-enye akụrụngwa maka ụlọ ọrụ ike na ụlọ ọrụ nkwukọrịta, na-echekwa otu ụzọ n'ụzọ anọ nke uru nrụpụta nke ụlọ ọrụ eletriki China. Ọ bụ ụlọ ọrụ nke abụọ kachasị na ụlọ ọrụ igwe na-esote ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ma na-arụ ọrụ dị mkpa na akụnụba mba. Site na nnabata usoro iwu a “itolite etolite ugbua na nhazi ihe,” ọnụọgụ akụ na ụba ga-adalata ma e jiri ya tụnyere ihe ndị mere n’oge gara aga, mana mgbanwe nhazi ihe na-enye aka maka mmepe ogologo oge yana kwa ụzọ dị mkpa maka mmepe China. Na nkeji iri na ise nke afọ 2014, mmụba ụwa gbadara ala karịa ihe a tụrụ anya ya, na mmụba afọ na-adaba na 2.75% site na 3.75% na ọkara nke abụọ nke 2013. N'agbanyeghị agbanyeghị arụmọrụ akụ na ụba a tụrụ anya na mba ụfọdụ (Japan yana Germany, Spain na UK), uto alaala n'ihi adịghị ike nke akụ na ụba ụwa.
N'ime ha, isi ihe kpatara ọdịda akụ na ụba ụwa bụ ngbanwe nke United States na China, mba abụọ kachasị ukwuu n'ụwa. Na United States, ịba ụba ngwa ahịa na njedebe nke 2013 karịrị atụmanya, na-eduga na mgbanwe ndị siri ike. Enwekwara ikike site na oge oyi oyi, na mbupụ na-ada ngwa ngwa mgbe uto siri ike na nkeji nke anọ na nsonaazụ nrụpụta na nkeji nke mbụ nke 2014. Na China, ọchịchọ ụlọ na-agbadata karịa ihe a tụrụ anya ya n'ihi mbọ iji chịkwaa mmụba otuto na nhazi nke ụlọ ọrụ ụlọ. Tụkwasị na nke ahụ, ọrụ akụ na ụba n'ahịa ndị ọzọ na-apụta, dị ka Russia, belatara ngwa ngwa, ebe esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mpaghara na-eme ka ọchịchọ a belata.
Na ọkara nke afọ a, China nabatara atụmatụ na usoro iji kwado ọrụ akụ na ụba, gụnyere enyemaka ụtụ isi maka obere ụlọ ọrụ obere na nke ọkara, ịba ụba nke mmefu ego na akụrụngwa, yana ndozi mgbatị ala. A na-atụ anya na uto ga-abụ 7.4% na 2014. N’afọ na-esote, a na-atụ anya ka GDP bụrụ 7.1% ka akụ na ụba gafere n’ụzọ na-aga n’ihu na-adigide ma na-agbada n’ihu.
Developmentlọ ọrụ akụ na ụba nke China emetụtawo ụlọ ọrụ akụ na ụba nke mba ọzọ, na GDP ụlọ na-agbadata na 7.4% site na 7.5% a tụrụ anya na mmalite afọ. Uto nke ụlọ ọrụ eriri na 2014 ga-adị ntakịrị karịa nke afọ gara aga. Dika onu ogugu ohuru nke National Bureau of Statistics, isi ahia ahia nke ulo oru waya na nke USB (ewepu ngwa anya na eriri) riri elu site na 5.97% kwa afo site na onwa mbu rue onwa nke July 2014, na ngụkọta uru ritere site na 13,98 % afọ na afọ. Site na Jenụwarị ruo Julaị, ọnụọgụ nke wires na eriri belatara site na 5.44% kwa afọ, ọnụego mbupụ ahụ mụbara site na 17.85% kwa afọ.
Ulo oru nke China abanyekwala oge mmepe site na oge mmepe di elu. N'oge a, ụlọ ọrụ na-ahụ maka eriri ga-agbaso usoro nke oge a, mee ngwangwa ngbanwe nke usoro ngwaahịa n'ime ụlọ ọrụ ahụ, mkpochapu ikike nrụpụta azụ, na ịkwanye mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ na ihe ọhụrụ, iji si na nnukwu mba na-emepụta eriri USB na ike nrụpụta.